SPC Raaxada Vinyl Gogosha
Sifada dabaqa alwaaxda dhabta ah
Dabaqa dhabta ah ee alwaaxa waa ka shaqaynta ka dib marka si toos ah loo jaro alwaax dabiici ah oo noqda, la ilaaliyo qaabka qurxinta leh alwaax adag oo dabiici ah oo dabiici ah gebi ahaanba, maxaa yeelay ma isticmaalin wakiilka koolada si loo barbar dhigo ilaalinta deegaanka guud ahaan sidaas. Dabaqa dhabta ah ee alwaaxda dhabta ah wuxuu ubaahan yahay inuu dhigo ...
Astaamaha sifiican loo diiwaangeliyey ee SPC - gaar ahaan sifooyinkeeda aan biyuhu xirin - ayaa ah meelaha muhiimka ah ee lagu iibiyo RSAs. Muujiyay waa Axiscor's Pro12. Qeybta LVT, koritaanka adkeysiga ee culus, waxay arkeen isbeddelada waaweyn qaarkood inay dhacaan 2019. Laga soo bilaabo hoos u dhaca ...
Dabaqa daboolaya wararka
Qeybta LVT gudaheeda, SPC iyo WPC waxay sii wadaan inay iibiyaan iibka. Sawirka waxaa ka muuqda 'Distinction Plus' oo laga soo qaaday aruurinta 'Shaw Floors' Floorté. Qaybta sagxadda dhulka ee adkeysiga u adkeysata ayaa sii waday korodhkeeda meteoric-ka ee 2019, mana jirto meel intaas ka badan ...
Cinwaanka: MAYA. 169 Hanzhong Road, Degmada Qinhuai, Magaalada Nanjing, Gobolka Jiangsu, Shiinaha